Yakhala isimbi, zavulwa izikole | News24
Yakhala isimbi, zavulwa izikole
PHOTO: nokuthula khanyile U-Ayanda Thabethe obezoqala uGrade R eSinamuva Primary.
KUQALE kahle ukuvulwa kwezikole e-Edendale naseMbali njengoba iningi labafundi kuleli bebuyele esikoleni izolo okokuqala kulonyaka.
Kuphele amaphupho kodado akade bezoqala uGrade R no 1 ebese kuphele iminyaka bephupha behlezi emagunjini okufundela njengalokhu izikole zesifundazwe sase-KZN zivule amasango.
Phela onkabi kudala bebabele ukuya esikoleni ‘esikhulu’ kwazise bebefunda amabanga andulela elokuqala.
Yize bebesakhona olayini abade kwezinye abazali bezofunela abantwana babo izikhala kodwa engxenyeni yeziningi kubukeka uqalile umshikashika wokufunda nokufundisa.
Esikoleni samabanga aphansi iSinamuva Primary School eMbali abazali akade bephelezele abantwana babo abebezoqala uGrade R bebegcwele igceke lesikole.
Omunye umzali okhulume ne-Maritzburg Echo uthe umzuzu wokuqala komntwana wakhe esikoleni kuba onzima kodwa oletha intokozo.
“Bengimphelezela ngoba ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ufike kahle esikoleni futhi ngibone nekilasi azofunda kulo. Benginovalo lokuthi angahle akhale uma sengimshiya kodwa ngimbona eneme exoxa nabanye ozakwabo,” kusho umzali.
Khona manjalo uthisha wakwa Grade R wakwesinye sezikole ezise-Edendale okhulume naleliphephandaba kodwa ongathandanga kudalulwe igama lakhe uthe umshikashika omkhulu kuba abazali abafika ngomzuzu wokugcina bezofuna izikhala.
“Ngokomyalelo womnyango wezeMfundo kufanele engabe usuku lokuqala abafundi bebuyile nathi sisemakilasi siyafundisa kodwa kuba nabazali abangabhalisi izingane ngesikhathi kugcine kumosheke usuku lonke. Njengoba sivule ngoMsombuluko thina bekuyithuba lokuthi lokuzilu ngiselele ukuya emakilasini uma izingane sezibuya kodwa sigcina simatasa sisiza abazali.”
Khona manjalo amalunga esishayamthetho saKwaZulu Natali aphume inqina avakashela izikole ezahlukene esifundazweni sonke. Uphathiswa wezeZimali esifundazweni uBelinda Scott yena uvakashele izikole ezingaphansi kwesifunda soMgungundlovu kumasipala waseMpendle. Phakathi kwezikole ezihanjelwe uScott kubalwa iLuthando high school, Imvunulo Secondary kanye neSiyazama Secondary.
Okhulumela umnyango wezeMfundo esifundazweni uKwazi Mthethwa uthe ngasohlangothi lwabo babone ukuvulwa kwezikole kuhambe kahle kakhulu.
“Ungqongqoshe ubevakashele esifundeni seLembe ukuyohlola khona ukuthi uqhubeka kahle yini umsebenzi wokufunda nokufundisa. Singasho nje sithi sigculisekile, nezinsiza zokufunda njengezinto zokubhala zabafundi zonke zifike ngesikhathi. Zikhona izingqinamba ezincane esibikelwe zona kodwa njengokwehla kwezinga lokuphasa kwabafundi bamatikuletsheni kulesiyasifunda kodwa konke lokhu sizokulungisa.”
UMthethwa uthe yize ukuvulwa kwezikole kuqale kahle kudungekile emuva kokushona kwabafundi abane engozini yetekisi eThekwini.